Fampiharana Android tsara indrindra hijerena antontan-taratasy | Androidsis
Fampiharana Android hijerena antontan-taratasy
Ny finday Android dia mamela antsika hanao karazana hetsika rehetra. Ho fanampin'izay, noho ny fametrahana ny rindranasa dia afaka manao bebe kokoa amin'ny telefaona isika. Ny iray amin'ireo zavatra azontsika atao dia antontan-taratasy scan. Ny hetsika izay tokony hataontsika indraindray ary ny fisaorana amin'ny findaintsika dia azo tsorina.
Mametraha rindranasa fotsiny amin'ilay fitaovana hahafahana manadihady antontan-taratasy. Saingy amin'izao fotoana izao dia manana rindrambaiko Android vitsivitsy mamela antsika hitily antontan-taratasy. Izahay dia mamela anao ny sasany amin'ireo tsara indrindra etsy ambany. Izy rehetra dia azo sintonina mora foana avy amin'ny Play Store.
Ireo rindranasa ireo dia voafantina amin'ireo maro izay misy. Fa izahay dia nitady ireo izay hanome anao fampisehoana tsara, ankoatry ny hoe mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa. Satria io dia singa iray manan-danja indrindra amin'ny fotoana rehetra. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
Manomboka amin'izay heverin'ny maro ho fampiharana tsara indrindra amin'ity sehatra ity izahay. Izy io dia fampiharana izay miavaka amin'ny famolavolana azysatria mahatonga azy io ho tena mora ho an'ny mpampiasa ny manadihady antontan-taratasy. Tena ahazoana aina sy intuitive. Ka tsy hanana olana amin'ny fampiasana azy ianao. Ary koa, tsy mila manana kaonty isika raha hampiasa ilay fampiharana. Ny tsy maintsy ataontsika dia ny mampifantoka ny fakantsary amin'ny fakantsary resahina ary maka sary. Azontsika atao ny manova ity antontan-taratasy eto ambany ity, mety tsara raha misy pejy maromaro ary tahirintsika ho PDF. Fomba tena ahazoana aina rehefa miasa.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity hijerena antontan-taratasy amin'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
CamScanner PDF Scanner, Scanner Document
Developer: Fampahalalana CamSoft
Faharoa, mahita rindrambaiko hafa isika izay matoky ny ankamaroantsika. Izy io dia fampiharana izay mitady hanampy antsika handamina ny zava-drehetra amin'ny fomba milamina sy mora amintsika. Inona koa, manana ny fiasan'ny antontan-taratasy fitiliana koa izahay, izay azontsika ampifandraisina amin'ny naoty raha mila izany isika. Ny fiasa mihitsy dia mora ampiasaina ary afaka manana scan isika ao anatin'ny segondra vitsy. Na dia amin'ity tranga ity aza, ny kalitaon'ny scan dia mety ho ratsy kokoa raha diso, satria mila fifanoherana bebe kokoa isika. Fa amin'ny ankapobeny dia rindranasa mora ampiasaina izay manome antsika ny fahaizana mijery sary na antontan-taratasy tsy misy olana.
Amin'ny laharana fahatelo dia manana safidy hafa malaza sy iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny Android. Tokony holazaina fa ny rindranasa Adobe rehetra dia miavaka amin'ny kalitaony, zavatra iray izay mitranga amin'ity. Ny fiasan'ny rindranasa dia tsotra dia tsotra, tsy maintsy mijerijery fotsiny amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny fitaovana isika. Afaka segondra segondra rehefa vita isika dia hamboarina amin'ny endrika PDF ny rakitra iray. Ho fanampin'izany, manome antsika ny mety amboary izany rakitra izany amin'ny fotoana rehetra. Ka izany dia safidy tena ahazoana aina sy feno hodinihina.
Nahavita an'ity fampiharana hafa ity izahay, izay amin'ity tranga ity dia avy amin'i Microsoft. Ka manana antoka ihany koa isika fa hiasa tsara izy io. Safidy izay miavaka indray amin'ny fananana a famolavolana tena tsotra sy ahazoana aina ho an'ny mpampiasa, satria mampahatsiahy antsika ireo programa na rindranasan'ny orinasa izany. Fantatra àry ny zava-drehetra, izay mamporisika azy mafy. Tena mandeha tsara izy io rehefa mijery antontan-taratasy ary manome valiny tsara ho anay raha ny kalitaon'ny sary no jerena. Azontsika atao ihany koa ny manitsy ny antontan-taratasy.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ary koa, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android hijerena antontan-taratasy
Ny tetika YouTube tsara indrindra ho an'ny Android
Ny Meizu 15 dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 22 aprily